Budata FIFA 22 maka Windows
Budata FIFA 22,
FIFA 22 bụ egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị mma na PC na consoles. Malite na slogan Kwadoro site na Football, EA Sports FIFA 22 na-eweta egwuregwu nso ka ndụ nezie na isi gameplay ndozi na a oge na-eweta innovations ọ bụla mode. FIFA 22 PC dị na Steam! Unsalable FUT dike ọkpụkpọ na-akwụ ụgwọ maka iwu maka FIFA 22 Ultimate!
Innovative HyperMotion gameplay teknụzụ na - eme ka egwuregwu ọ bụla dị na PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X | S na Stadia nke FIFA 22 naanị.
Hypermotion: Odi naanị na PS5, Xbox Series X / S na Stadia, FIFA 22 nke teknụzụ egwuregwu ọhụụ ọhụụ HyperMotion na-eweta egwuregwu ọ bụla na-abịaru nso neziokwu na ọnọdụ ọ bụla.
Advanced 11v11 Capture Capture - Ekike Xsens na-eme ka o kwe omume ijide ihe nke ndị ọkachamara egwuregwu bọọlụ iri abụọ na abụọ na-egwu egwu nke ukwuu na nke mbụ ya. Otu ọnụọgụ a na-enwetụbeghị ụdị data dị elu nke mmadụ na-enye ndị egwuregwu na otu egwuregwu ike ime ihe na FIFA 22.
Mmụta Ngwaọrụ - Teknụzụ dị elu na igwe mmụta nke igwe algorithm na-amụta site na ihe karịrị 8.7 nde okpokolo agba site na njide egwuregwu dị elu, wee dee animation oge ọhụrụ iji mepụta ihe egwuregwu bọọlụ organic na mmekọrịta dị iche iche na pitch.
Ezigbo Niile Team Movement - Xsens skins na-edekọ mmetụ ọ bụla, omume, ịgba na esemokwu nke ndị egwuregwu 2 niile na-agbasi elu ike na nke izizi mbụ, na-ewepụta data nke na-akwado ihe karịrị ihe ngosi ọhụrụ 4,000 na FIFA 22, ma na-ejide ike bọọlụ, nkenke, na egwuregwu maka onye ọ bụla egwuregwu na egwuregwu ahụ. Ọ na-emezi ahụ ya.
Tactical AI - Kwadoro site na consoles ndị na-esote ya, ọgụgụ isi ọkpụkpọ miri emi na -emepụta ọkwa ọhụụ ọhụụ, na-enye onye ọkpụkpọ ọ bụla nghọta ka mma banyere usoro iwe na mmegharị na mmegide.
Na mmejọ: 6x na-eme mkpebi karịa nke abụọ na-eme ka mmata gburugburu ebe obibi nke ndị na-eme ihe, na-enyere ha aka ịgba ọsọ karịa mgbe ha na-edozi ma na-eme ngwa ngwa karịa bọọlụ na-adịghị.
Na Nchedo: AI chebe onwe ya emegharịrị ugbu a na-enye ndị otu ohere imekwu ihe, na-edebe ọdịdị ha ka ha na-agagharị nọhịa na oghere dị nso.
Ihe ịma aka ikuku nke Kinetic - Teknụzụ mmekọrịta abụọ na-eme ka mmekọrịta ọkpụkpọ na-emekọrịta ihe nkiri ọkpụkpọ iji mepụta ezigbo ihe na nkenke nọgụ ahụ iji ruo airballs mbụ. Youll ga-enwe ike ịhụ ịmanye, ịdọ aka na ịdọrọ nke ndị na-eche nche na ndị na-ewe iwe na obe, bọọlụ doro anya na ogologo gafere.
Njikwa Bọọlụ Cool - Ogologo eserese abụọ na-eme ka njikwa bọọlụ ka ọ bụrụ ihe okike na mmiri karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Jiri ohere ọhụụ ga - aga nihu na FIFA 22 site na iwetu bọọlụ ikuku karịa na teknụzụ, zoo bọọlụ nelu ala karịa agile, na ịnụ ụtọ ikike karịa na njide bọọlụ.
Player Humanization - Ihe nkiri na-eme bọọlụ ọhụụ na omume ihu igwe nke Enhanced 11v11 Match Catch nyere aka weta ihe odide na pitch na ndụ. Nwere ike ịhụ ndị asọmpi na-ekwu okwu, na-atụ aka, ma na-agbagharị dabere na omume ahụ. Na mgbakwunye, agagharị agagharị gosipụtara ngagharị ngwangwa nke ndị egwuregwu ahụ, na-eme FIFA ...
New Gameplay Atụmatụ
Mee ihe dị iche na pitch na atụmatụ egwuregwu ọhụụ na FIFA 22, site na ndị na-eche nche echegharị ọhụrụ na usoro aghụghọ ọhụrụ.
Ndị na-eche nche echegharịrị - Usoro ọfụma ọhụụ na-eweta ọkwa ọhụrụ nke ọgụgụ isi na njedebe ikpeazụ, nchekwa ịgba ọsọ a pụrụ ịtụkwasị obi karị na mkpebi amamihe dị netiti ọkwa. Personalitydị onye na-eche nche dị iche iche na-enweta ụdị dị iche iche nke onye nchebe noge egwuregwu niile.
Real Ball Physics - Ezigbo data ụwa webatara na FIFA 22 na-ewere egwuregwu bọọlụ bọọlụ maka ọkwa ọhụrụ nke eziokwu.
Super Rush - Ngwá ọrụ egwuregwu egwuregwu ọhụrụ nke na-agbanwe agbanwe agbanwe notu ọnọdụ. Spgba ọsọ ọsọ na-enye gị ikike ịchịkwa osooso mgbe ị na-atụgharị ma ọ bụ na-agbachitere.
Attzọ Mwakpo Ọhụrụ - Mee ka ndị otu gị nwee ụdị dị iche iche na ọkara nke ọ bụla site na usoro ọhụụ ọhụrụ na-enye gị ikike ịchịkwa otu ị si egwu na FIFA.
Bie ndụ negwuregwu bọọlụ gị site na ịtụgharị klọb gị site na onye na-agbahapụ onye ọzọ nụwa na FIFA 22 Career Mode ma nwee ọ experienceụ ọhụụ ọhụụ Player na-enye gị ohere ịga nihu, nweta ihe ịga nke ọma ma soro Pro gị na egwuregwu ahụ.
Volta Football - VOLTA AKWBKWỌ AKW returnsKWỌ jiri talent ọzọ na pitch na ụzọ ọhụrụ iji gosipụta onwe gị ma jikọọ na ndị otu gị nokporo egwuregwu bọọlụ nokporo ámá gburugburu ụwa.
FIFA 22 Otu kachasị
Ndị FUT FUT: Relive nostalgia na ndị egwuregwu bọọlụ echefughi echefu na-alaghachi na pitch dị ka FUT Heroes na FIFA 22 Ultimate Team. Na-eme ememme ụfọdụ echefuru echefu echefu na bọọlụ akụkọ ihe mere eme na ihe ọhụrụ FUT Heroes na-anọchi anya oge echefu echefu nke mere ka obi ha nwuo. Ndị FUT FUT nwere kemịkalụ pụrụ iche nke otu egwuregwu jikọrọ ya na oge ndị dike, na -eme njikọ klọb na-acha akwụkwọ ndụ na njikọ mba na ndị egwuregwu niile si otu egwuregwu. Nke a na - enye gị ụzọ ọhụụ ị ga - esi wuo ndị ị rọrọ nrọ ma weghachite oge ama ama nke bọọlụ na FUT 22.
FIFA 22 Ụdịdị